MAQAAL:Xal Raadintii Roble Iyo Xujooyinka Farmaajo Waa Noocee?? Dr Nuur C/Raxman -
HomeArimaha bulshadaMAQAAL:Xal Raadintii Roble Iyo Xujooyinka Farmaajo Waa Noocee?? Dr Nuur C/Raxman
September 16, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Madaxweeynaha Xilka ka dhamaaday Maxamed Farmaajo uu Xilka u dhaariyay R/Wasaare Rooble Waxaana uu Bilaabay wadahadalo siyaasadeed dhanka Arrimaha doorashooyinka waxaana jiray waqtigaa dagaal xoogan oo siyaasadeed una dhaxeeyay Madaxweeynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Farmaajo Iyo Mucaaradka , Maamul goboleedyada Jubbaland Iyo Puntland.
Halkee ayuu shaqa ka bilaabay:
R/wasaare rooble ayaa bilaabay shaqo ah in uu kormeer siyaasadeed uu ku soo maro qaar ka tirsan maamuladii diidanaa hab dhaqanka siyaasadeed ee Madaxweeyne maxamed farmaajo..
R/wasaare rooble ayaa safar ku tagay Maamulka Puntland asigoo doonayay in uu kala hadlo arrimaha cakiran ee doorashooyinka hase ahaatee way isku fahmi wayeen .
Maxaa dhacay:waxaana dhacday R/Rooble Mar lagu Casuumay Casho Sharaf sagootin aheeyd in uu ka baaqday asigoo Amar ka qaadanayay Madaxweeynihii Hore Maxamed Farmaajo Sidaana uu uga baaqday cashadii sagootinka aheeyd.
R/wasaare rooble ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxaana uu la kulamay Culeeys siyaasadeed oo ka imaanayay dhanka Mucaaradka Musharaxiinta Madaxweeynaha.waxaana dhacay :
Maxaa dhacay :Midowga Musharaxiinta ayaa ku baaqay Banaanbax nabadeed Hase ahaatee waxaa diiday Madaxweynihii Hore Farmaajo Waxxaana weerar lagu qaaday Madaxweeynayashii Hore Somaliya shariif Iyo Xasan Shiiq,Sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday R/Wasaarihii Hore Somaliya Xasan Cali Kheyre Iyo Qaar ka tirsan Musharaxiinta .
Dagaalkii kadib: R/wasaare rooble ayaa isku dayay in uu qaato doorkiisa siyaasadeed waxaana uu bilaabay wada hadalo dhinaca mucaaradka ah waxaana ay isla gaareen Hishiisyo Horu dhac ah iyo in xal laga gaaro Arrimaha Doorashooyinka.Hase ahaate waxaa cagta mariyay Hishiisyadaasi Madaxweeynihii Hore Maxamed Farmaajo waxaana sidaasi ku Bur-buray Wada hadalkii Midowga Musharaxiinta Iyo Xukuumadii Rooble.
Ka jawaabid Kulankii Rooble Iyo Mucaaradka:
Muxuu Talaabo ah uu qaaday:Madaxweeynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Farmaajo ayaa soo saaray wareegto waxaana uu isugu yeeray Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ,Hase ahaatee Ujeedka Farmaajo ayaa ahaa in uu Carqaladeeyo Hishiisyadii Dhex maray R/Wasaare Rooble Iyo Midowga Musharaxiinta.Kuna Maran Habaabiyo Shacabka soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka.
Hase ahaatee Maxamed Farmaajo ayaan ku guuleeysan in uu qabto shirkii uu isugu yeeray Madaxda Maamulada inkastoo ay ka aqbaleen codsigiisa sedex maamul iyo Gobolka Banaadir.
Beesha Caalamka Oo dib isku soo abaabuulay :Dhanka kale Waxaa door lama filaan ah qaatay Beesha Caalamka Oo markale isugu yeertay Maamulada dalka Iyo Madaxweeyne Farmaajo Shirkaasina Waxaa la Filayay in uu ka dhaco Teendhada Afisyooni .Hase ahaatee waxaa Carqaladeeyay Maxamed Farmaajo .
Sidoo kale Madaxdii Maamulada Jubbaland Iyo Puntland ayaa ku sugnaa in mudo ah Magaalada Muqdisho Waxaana ay sugayeen in ay ka qeeybgalaan shirka ka dhacayay Teendhada Afisyooni.Hase ahaate Ma dhicin.
Xirfadii Farmaajo:Madaxweeynaha Waqtiga ka dhamaaday Maxamed farmaajo ayaa la yimid Xirfad kale waxaana uu lahadlay Guddomiyaha Baralmaanka ee waqtigiisa dhamaaday waxaana uu isugu yeeray kulan.
Kulankaasi ayaa lagu ansixiyay Muddo kororsi LABA SANO AH Oo loo sameeyay Madaxweeyne Farmaajo .
Yaa ka Hor Istaagay :Dhanka kale Waxaa si weeyn uga Horyimid Mucaarad Midwoga Musharaxiinta Jubbland Puntland Iyo Beesha Caalamka .Hase ahaate Maxamed Farmaajo ayaan ka jawaabin Diidmada ka timid Muddo kororsiga.waxaana uu iska sii watay Shaqadiisa.
MUDO KORORSI MAXAA DHACAY:
Ciidamada Xooga dalka somaliyeed qeeybihiisa kala duwan ayaa soo buuxiyay Magaalada Muqdisho waxaana ay ka hortageen Muddo kordhintii Maxamed Farmaajo ee labada sano aheeyd. Hase ahaatee waxaa Xabad Joojin ku dhawaaqay R/wasaare Rooble asigoo sheegay in miiska wada hadalka la isugu Yimaado.
XIRFAD YAQAANKII FARMAAJO MUXU LA SOO SHIRTAGAY
Dhanka kale Madaxweeynihii Hore Maxamed Farmaajo ayaa kulan isugu yeeray baarlamaanka Federalka Soomaaliya waxaana uu ka tanaasulay Mudo kordhintii labada sano aheeyd Waxaana uu AMNIGA DALKA IYO DOOROSHOOYINKA KU WAREEJIYAY XUKUUMADA R/WASAARE ROOBLE.
Bilaawgii SHAQADA R/WASAARE ROOBLE IYO CAQABADA LA HORDHIGAYAY.
R/Wasaare rooble ayaa bilaabay in uu kulan isugu yeero madaxda maamulada iyo Musharaxiinta Madaxweeynaha waxaana ay isla gaareen Hishiisyo Bilaaw ah iyo in la bilaabo doorashooyinka Iyo In wax laga bedelo Guddiyadii Muranka dhaliyay,iyo In xal laga gaaro Muranka Ka taagan Gobolka Gedo.
Sida muuqatay R/Wasaare Rooble ayaa ka Gaaray Guulo Bilaaw siyaasadeed ah waxaana bilaawday doorashooyinkii Aqalka sare. weyna socdaa si habsami ah.
Xal radinta Cadaalada aheeyd:R/wasaare Rooble ayaa bilaabay in ay Cadaalad hesho Ikraan Tahliil oo ka tirsaneed Ciidanka NISA Waxaana uu u saaray Guddi in la heleo Cadeeymo kiiska IkraanTahliil Hase ahaate waxaa warqad soo saaray Taliska NISA FAHAD YAASIN Waxaana uu sheegay ikraan Tahliil in ay dhimatay ayna dileen AL-SHABAAB .Hase ahaatee ALSHABAAB Dhankooda waa beeniyeen.
Maxaa Xigay Talaabo ah:R/wasaare Rooble ayaan ku qancin Hadalka NISA Balse waxa uu soo saaray wareegto ah in 48 saacadood gudahood laga helaa TALISKA NISA XOGSAXAN .Hase ahaatee Taliyahii Hore NISA Fahad Yaasin ayaa soo saaray Wareegto ku qoran in uu Xogta Siinayo Gollaha Amniga Qaranka .
Rooble Go,aan Nuucee ah ayuu qaatay ?
XILKA QAADIS MAGACAABID:R/Wasaare Rooble ayaa Xilka ka qaaday Taliyahii hore NISA FAHAD YASIN Waxaana uu Xilka u magacaabay Sareeyo guud Gen:Bashiir Goobe. hase ahaatee waxaa ka Hor Yimid Madaxweyne Farmajo.waxaana uu dhankiisa soo magacaabay Taliyaha Cusub ee NISA Col Yassin fareey.Iyo Sidoo kale Waxa uu Lataliyaha Amniga Madaxtooyada u Magaacabay FAHAD YASIN.
JAWAAB NOOCE AH UU BIXIYAY ROOBLE?
Sidoo kale R/wasaare rooble ayaa xilka ka qaaday wasiirkii Hore Amniga Xasan Xundubeey Waxaana loo magacaabay C/Laahi Maxamed nuur Hase ahaatee waxaa ka Hor Yimid Madaxweeyne Farmaajo Xil kaqaadistaasi.
Sidoo kale R/Wasaare Rooble ayaa ka mamnuucay in warbaahinta qaranka In laga sii daayo Qoraalada Madaxweeyne Farmaajo Iyo Wareegtada uu soo saarayo. Dhinaca kale soo saaray wareegto lagu xaniyabyo Hanaanka Maaliyada Sidoo kale Waxa uu Kiiska Ikraan ku wareejiyay Maxkamada ciidamad qalabka sida.
Jawaabtii Xirfadlaha Waqti dheereesyka Farmaajo :Dhanka kale Madaxweyne Farmaajo ayaa Soo Saaray Wareegto Iyo Magacabis uu sameeyay waxaana uu soo magacaabay guddi soo baara kiiska AUN Ikraan Tahliil.
JAWAABTII ROOBLE IYO SHACABKA:R/Wasaare Rooble ayaa ka hor yimid gudigaasi waxaana uu sheegay in uusan qabin sharciga DKM SOMALIYEED. dhanka kale shacabka somaliyeed ayaa ku wareeray siyaasada iska daba warega ah ee madaxweeynihii hore maxamed farmaajo waxaana ay ku cabireen in uu doonayo in dalkaan uu xakumo ama uu dib u celiyo waana nasiib daro ayay dhaheen.
Ugu danbeeyntii waxa aad moodaa in madaxweeyne farmaajo uu khal-khal siyaasadeed ku dhacay sababtoo ah waxa uu mar waliba soo saaraya wareegto ka hor imaanayso dadaalada uu wado R/Wasaare Rooble. Waxaana ay u egtahay in ku jiro Dagalkii ugu danbeeyay ee dhinaca siyaasada.uuna doonayo in uu waqtiga sidaa ku dhameeysto.
W/q Dr Nuur C/raxamaan Abuukar